वीरगन्जमा आजदेखि 'नो हर्न' र 'नो प्लास्टिक' ! फोटोफिचर | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ असार २ सोमबार, १२:३५
वीरगन्जमा आजदेखि ‘नो हर्न’ र ‘नो प्लास्टिक’ ! फोटोफिचर
२०७५ पुष १७ गते प्रकाशित, l १६:१७
वीरगञ्ज, १७ पुुुस । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आजदेखि हर्न र प्लास्टिक प्रयोगमा निषेध लगाएको छ । अग्रेजी नयासालको स्वागत गर्दै महानगरलाई सफा राख्न र सभ्य बनाउन हर्न र प्लास्टिकमा निषेध गरिएको हो ।
महानगरको मंसिर १८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई पुस १७ बाट हर्न निषेध र प्लाष्टिक निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही अनुरुप हर्न र प्लास्टिक निषेध गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
महानगरपालिकाले आज बिहान नो हर्न र प्लास्टिक प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्धको बारेमा निकालेको रयाली नगरपरिक्रमा गर्दै कोणसभामा परिणत भएको थियो । महानगरपालिकाले सुरु गरेको यो सचेतना अभियान एक हप्ता चलाउने छ ।
अभियानमा सहभागीहरुले ‘मेरो धर्ती, मेरो माटो, मेरो आँगन, मेरो बाटो, मै सफा गर्छु, कुर्दिनँ कसैको बाटोलगायतका नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए । महानगरपालिकाका वडा समितिको नेतृत्वमा ३२ सबैवडामा समुदाय प्रहरी साझेदारीले बिहान ७ः३० बजे देखि ८ बजेसम्म आधा घण्टा पलास्टिक टिप्दै सरसफाइ अभियान संचालन गरेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै पहिलो वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा। भीष्मकुमार भुषालले एक साता सम्झाउने तर अटेर गरेको खण्डमा दण्डात्मक उपाय अपनाउने नीति अख्तियार गरिएको जानकारी गराए ।
नगरबासीले आफ्नै लागि नगर सभाराख्न अघीबढनु पर्ने बताउदै उहाले भन्नु भयो,“ हामीले सक्छौं भन्ने भाव देखाएर सहयोग गर्नुभयो भने राम्रै हुन्छ ,होइन भने पुस २४ देखि महानगरपालिका र जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले दण्डात्मक उपायहरु ल्याउँछ नै ।’
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले प्लाष्टिक जथाभावी फाल्नेको फोटो खिचेर महानगरपालिकालाई दिएको खण्डमा उसलाई गरिने जरीवानाको २५ प्रतिशत दिने घोषणा समेत गरेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सरावगीले वार्षिक १२ करोड खर्च गर्दा समेत महानगरपालिका सफा हुन नसकेकोले अब कारबाहीको बाटो अपनाउने बताउनु भयो ।
‘फोहोरी र कोलाहाबाट वीरगञ्जलाई मुक्ति दिन जथाभावी फोहोर फाल्ने र हर्न बजाउनेलाई सुरुमा कम्तीमा ५ हजार जरीवाना गर्छौं । त्यसपछि बढाउँदै १ लाखसम्म लिन्छौं’, मेयर सरावगीले भने । सरावगीले वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधा रोक्ने समेत चेतावनी दिए ।
तस्विर– अनिल तिवारी